Yakawana aphasia uye kuverenga kunetsekana: rubatsiro rwetekinoroji nyowani - Kudzidziswa kwekuziva
Kutaurirana ihunyanzvi hwakakosha kumunhu, uye hunogona kukuvadzwa pamatanho akati wandei muvanhu vane aphasia. Vanhu vane aphasia, muchokwadi, vanogona kuve nematambudziko mukutaura, kunyora, kuverenga uye kunzwisisa chero mhando yemutauro. Tsvagurudzo yakanyanya kutarisa kupora kwekutaura, uye hazvishamise kupihwa kukosha kwehunyanzvi uhu muhupenyu hwezuva nezuva. Zvishoma zvinoregeredzwa, zvakadaro, inzvimbo yezvinowanikwa zvekuverenga kusagadzikana. Izvi kunyangwe kuverenga hunyanzvi hwakakosha muhupenyu hwemumwe nemumwe wedu, uye zvakatonyanya kudaro mune yeavo avo, nekuda kwezvikonzero zvebasa kana varaidzo, vaiwanzo verenga mapeji akawanda mazuva ese. Knollman-Porter, mu2019, akataura kuti kuoma kwekuverenga kunogona sei kutungamira mukudzikira kwakanyanya muhunhu hwehupenyu (kuzvidzora kwakaderera, kutora chikamu munharaunda kushoma, kushungurudzika kukuru) kunyangwe mune vasingadi kuverenga.
There akati wandei mapurojekiti muUS neEurope anovimba nemasikirwo emitauro ekugadzirisa (NLP), senge iyo Simplext chirongwa, iyo inotarisira kurerutsa zvinyorwa pachayo nekuda kwevanhu vane aphasia, kana iyo CHEKUTANGA (yairehwa vanhu vane autism) iyo inoteedzera uye kutsiva zvinhu zviri muchinyorwa izvo zvinogona kuve chipingamupinyi pakunzwisisa.
Ongororo yakaitwa naCistola nevamwe vaaishanda navo (2020)  yakanangana nemidziyo yakashandiswa munguva yakapfuura kubhadhara zvinetswa zvekuverenga muvanhu vane aphasia nekudzokorora zvinyorwa gumi nezvitatu zvakawanikwa kubva kumatunhu akasiyana. Vatsvakurudzi vakaedza kupindura mibvunzo inotevera:
Ndeapi maturusi akagadzirwa kubatsira aphasic vanhu vane matambudziko ekuverenga
Ndeapi mashandiro ekuwanika ezvishandiso zvetekinoroji zvinoshandiswa zvakanyanya zvinogona kubatsira kudhinda zvakanyorwa?
Kana ari iwo wekutanga mubvunzo, zvinosuwisa kuti chidzidzo chakawana mumwe kushaikwa kwezvishandiso chaizvo. Muzviitiko zvakawanda maturusi akati wandei akashandiswa pamwechete (senge kutaura kwekutanga kana kuratidza mameseji). Aya maturusi akagadzirwa, inofanirwa kusimbiswa, iwo anga asina kugadzirirwa zvidzidzo zvine aphasia, asi zvevana vane dyslexia uye vechidiki. Aya maturusi anogona achiri kubatsira kune aphasic vanhu, asi kazhinji haatenderi kugadzirisa dambudziko rine chekuita nekuverenga.
Naizvozvo, zvinodikanwa kuti ugadzire chaiwo maturusi evarwere aphasic. Chinhu chakakosha chichava icho che kugadzirisa kusangana nematambudziko-ekuona uye ekufamba matambudziko.
Zvimwe zvinhu zvakakosha zvichave:
Unhu hwekutaura kwekutanga
Nhanho yekutaura kwekutanga
Iko kugona kushandura saizi yechinyorwa uye nzvimbo pakati pemashoko
Iko kugona kushandura otomatiki mazwi akaomarara kana zvirevo kuita mafomu akareruka
Kupedzisa, pachine nzira refu yekufamba. Zvishandiso zvine simba uye zvinogadziriswa zvichadikanwa. Nekudaro, icho chinhu chinogona kudzora kushushikana, kuzvidzora kwakaderera uye kuvimba kune vanochengeta mune vanhu vane aphasia.
 Knollman-Porter, K., Wallace, SE, Brown, JA, Hux, K., Hoagland, BL naRuff, DR, 2019, Mhedzisiro yezvakanyorwa, zvekunzwika, uye zvakasanganiswa maitiro pakunzwisiswa nevanhu vane aphasia. American Journal of Speech - Mutauro Pathology, 28, 1206-1221.
 G. Cistola, M. Farrús, I. van der Meulen (2020). "Aphasia uye akawana hurema hwekuverenga. "Ndedzipi nzira dzehunyanzvi hwepamusoro-soro dzekubhadharisa kushomeka kwekuverenga?" International Zvinyorwa zveMitauro & Kutaurirana Matambudziko.
aphasia, aphasia uye matekinoroji matsva, kuverenga
Yakawana aphasia uye kuverenga kunetsekana: iwo rubatsiro rwehunyanzvi hutsva2020-12-172020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/ezgif-2-628b5dc636f7.png200px200px